I-AlmaMar - indlu engasebhishi enkabeni yeMatanzas - I-Airbnb
I-AlmaMar - indlu engasebhishi enkabeni yeMatanzas
Navidad, VI Región, i-Chile
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Yanina
U-Yanina Ungumbungazi ovelele
I-AlmaMar Matanzas itholakala kulayini wokuqala wolwandle, ngenhla nje kosebe lolwandle, inokufinyelela okuyimfihlo, emphakathini wezindlu eziyisikhombisa e-mecca of windsurfing / kitesurfing e-Matanzas. Imaphakathi nehhotela i-Surazo ne-Roca Cuadrada futhi inokubuka kokubili. Izimo zama-surf nomoya lapha eze-World-Class futhi ikhefu lokuntweza e-La Mesa liphambi kwendlu ngqo. Gqoka i-wetsuit yakho egumbini lokuphumula bese uphuma phambili bese ushaya i-surf
Ingaphambili lonke lekhaya linezindonga zengilazi zokuthwebula ukubukwa okumangalisayo kolwandle. Ikhishi elivulekile, indawo yokudlela kanye negumbi lokuhlala linophahla lwamamitha angu-4 futhi livulela indawo enkulu, evikelekile lapho uzothola khona i-BBQ nezitebhisi eziholela ezansi ogwini. Amakamelo amabili okulala amakhulu kanye namagumbi okugeza ahlala ophikweni olusenyakatho. ohlangothini olusenyakatho yendlu uzothola ubhavu oshisayo, ohlungiwe oshisayo kanye nomgodi womlilo. Kuyo yonke indawo ngaphakathi nangaphandle kwekhaya uzomangala ukubukwa okungavinjelwe kolwandle. I-AlmaMar inamafasitelana amabili namafasitela nezindonga ezivalekile ezengeziwe zokuhlukanisa umsindo nokufaka ukushisa.
4.91 · 132 okushiwo abanye
Ihlukile e-Matanzas, i-AlmaMar ijabulela ukufinyelela okuqondile ebhishi ukusuka endaweni engaphambili. IDowntown Matanzas iwuhambo lwe-1km kuphela esihlabathini. Edolobheni uzothola izimakethe, izindawo zokudlela, amahhotela asesitayeleni, amakilasi e-yoga nokuqashwa kwemishini yokuntweza nokuhamba ngamabhayisikili. I-Santa Cruz kanye nesifunda sewayini sase-Colchagua Valley imayelana nehora elingu-1.5 uma uhamba kalula.
Ngeke ngibe khona ngesikhathi sokuhlala kwezivakashi, kodwa ngihlala eduze futhi uma kukhona ukuphazamiseka, bangangithinta futhi ngizokwenza konke okusemandleni ami ukubasiza futhi ngibe khona uma kunesidingo.
UYanina Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Navidad namaphethelo